Hofisi Nyowani, Rwendo Nyowani Chechitatu Chikamu cheLianchuang technical Zone Yapera | Lianchuang
Hofisi Nyowani, Rwendo Nyowani Chechitatu Chikamu cheLianchuang technical Zone Yapera
Nhau dzakanaka! Chikamu chechitatu cheLianchuang technical zone chakapera. Kusvika ikozvino, horo yekuratidzira yakapera kugadzirwa, uye Lianchuang Appliance yakatamira kuhofisi itsva nenzira.
Chikamu chekutanga neyechipiri cheLianchuang technical Zone ndezvenzvimbo dzinozivikanwa epamusoro-tech mapaki. Chikamu chechitatu chivakwa cheGrade A hofisi. Lianchuang technical Zone ine mabasa ekushambadzira maindasitiri, rutsigiro rwemaindasitiri, uye mabasa emaindasitiri. Uye Lianchuang Appliance iri pano neinobatanidza hofisi, R & D, kugadzirwa uye kuratidzwa.
Iyo hofisi nyowani uye nharaunda nyowani inopa vashandi nharaunda yakasununguka yekushanda. Lianchuang ichaita chaizvo zvirinani uye igadzire hukuru mune ramangwana.
Chii zvakare, ndapota shanya pazasi imba yekuratidzira yereferensi yako. Zvese zviratidziro zvakanaka mumhando uye dzakanaka mukugadzirwa. Iwe unogona kuvaona pane saiti kana VR maonero online newebhu saiti yedu.
Yenguva iripo, Lianchuang anoshanda mumunda wemasaini kwemakore 27, nyanzvi mune Air Cooler, Heater, Fan, Humidifier, yakanaka uye mutengo wakanaka wokukwikwidza. Kunyangwe kupi, zvigadzirwa zvedu zvichiri kugadzira, isu tirikushumirwa iwe, tinogamuchirwa kuLianchuang.
Nguva yekutumira: Chivabvu-30-2020